Madaxweyne Farmaajo maka dhabeyn doonaa ballanqaadkii uu sameeyay? | Baydhabo Online
‘Shacabka iyo dowladdu waa isku hal, shacabka iyo dowladd iswadataa cid walba way ka adkaan karaan’, ayuu u sheegay baarlamaanka. Madaxweynaha la doortay wuxu sheegay in dalku dagaal ku jiro. Wuxu si cad u qiray in sababta kooxda Al-Shabaab ay dowladda uga adagtahay ay tahay in ay dadka uga dhowyihiin.
Damaashaadka Muqdisho ee doorashada Farmaajo
Boqolka maalmood ee ugu horeeya ayey ku xiran tahay sida dowladdiisa ay u shaqeyso, taas oo muujin doonta inuu ka dhabeeyay ballamaha uu qaaday. Hadaba siduu wax uga qaban doonaa Farmaajo arrimahaasi: Wuxuu yiri “Siyaasaddu waa xal raadin ee khiyaano maahan, siyaasadu been ma’aha, siyaasadu ballan ka bax ma’aha. Aduunkana kama jirto, diinta islaamkana ma qabto inaad qof been u sheegto, ceeb weye.”